President Abdi Mohomud Omar a visionary leader of Somali regional state in Ethiopia – Kichuu
HomeNewsAfricaPresident Abdi Mohomud Omar a visionary leader of Somali regional state in Ethiopia
Abdi Mohomud Omar, President of Somali Regional State amazing speech about anti federalism forces in
(tigraionline)—–Abdi Mohomud Omar, president of Somali regional state is the mastermind visionary leader behind the tremendous achievements in the region.
Maddi oduu waan kana maxxanse TIGRAY ONLINE jedhama. Miidiyaa Wayyaaneeti. Akkuma agartan Abdi Ileey faarsaa fi jajjabeessaa jira. Guyyoota muraasa dura waan bulchaan Naannoo Tigraay Dabra Tsiyoon dubbate gara afaan keenyaatti hiikeen ture. Achi keessatti ”yeroo sirni ittiin bulchaa turre daandii irraa maqfamu usnee hin laallu, nutis saboota biroo walin taanee tarkaanfii fudhanna” jedhee ture. Saboota jarri baantu keessaa inni kun (ummata Somaalii yoo bakka hin buunellee) isa tokko tahuu isaa durattuu beeyna, ammas irra deebi’anii mirkaneessaa jiru. Wayyaaneen hookkara hamaa kaasuuf qophii godhaa jiraachuu agarra. Hoggansa haaraa waliin dhaabbachuun balaa jarri aggaamtu fashalsuuf hunduu of haa qopheessu.
የትግራይ ጄነራሎችና የደህነት አባላት አዲስ አበባ የሚገኙትን የሶማሌ ክልል ምሁራንና ሽማግሌዎች እያስፈራሩ ነው! – https://t.co/YbZyNtGITJ pic.twitter.com/kLItYrUtw8
— Kichuu (@kichuu24) June 5, 2018
OMN: የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲ ኢሌ ድብቅ ዕቅዶች (LIVE) Jun 4, 2018 – https://t.co/Oku2Hb83TG pic.twitter.com/ahE1Ibsm2a
— Kichuu (@kichuu24) June 4, 2018
Inaalillahi wainnaa ileyhi raaji’uun
Goodina Baalaa Aanaa Madda Walaabuu Ganda Maddaa Aradda Qabrii Manguddotti Poolisoonni Liyyuu Poolisii Daa’ima Waggaa 11 Haala Suukaneessan Qalan !
#RDH Caamsaa 28 2010
Guyyaa Kaleessaa Caamsaa 27/2010 Godina Baalee Aaanaa Madda Walaabuu ganda Maddaa Poolisoonni Liyyuu Haylii Soomaalee daa’ima tokko qalanii akka deeman gabaafameera.
Daa’imni qalamte kun Tamiimaa Suleeymaan Abdii kan jedhamtu yoo taatu, wayita Liyyuu haylii Soomaaleen gorra’amtutti horii tiksaa akka turte maddeen gabaasaniiru.
Humni Liyyuu Poolisii kun biyya Mootummaa qabdutti irra deddeebi’uun daangaa Oromiyaa ce’uun haleellaa gegeeessaa kan jiru yoo tahu, Mootummaan nageenya uummataa eeguuf dirqamni itti kenname maaliif callisee akka laalu hibboo deebii dhabe ta’e jira.
Uummanni Oromoo dhimma daangaa kanaaf xiyyeffannoo itti kennuun yeroo dhumaaf akka irratti qabsaa’u dhaamsa dabarsina.
Dhiigni Lammii Keenya Kalattii Daangan Dhangalaa’u kun akka Dhaabbatufi Hojiin Muumen Minsteraa fi PMNO Obbo Lammaa Magarsaa Hojiin qabatama hojjata jiran Hawaasa keenyaf akka beeksisanis gaafana .
Dubartiii Looni Tiksaa jirtu bifa kanaan mararfana tokko malee Qaluun ergaa maal jedhu akka biyyat Abdiin Illee dabarsaara ?
Yoomumma Dhiigni Ilmaan Oromoo akka dhiiga ilma namat ilaalama ?
Gochii kun osso Biyyoota Alaa keessatti muudate Adunyaan guutun hiriira torbeef baati ture
Lola qindaawaa jiraattota Godina Gujii ollaa Naannoo Sabaa fi Sablammoota Kibbaa jiraatan irratti banameen guyyaa kaleessaa lubbuun namoota hedduu darbuu fi qabeenyis barbadaa’uun himame.
Shira qaamoleen garaa garaa faayidaa dhuunfaaf jecha xaxanii fi duula babal’ifannaa daangaan wal qabatee, walitti bu’iinsa qabsiifamuun gaaga’amni lubbuu namaa fi qabeenyaa mudatu itti fufee, hedduus qe’eesaarraa buqqisaa jira.
Iddoowwan gama kanaan rakkoo jabaaf saaxilamanii jiran keessaammoo, Aanaaleen Godina Gujii fi Gujii Lixaa, Naannoo Saboota Sablammootaa fi Uummattoota Kibbaatiin wal daangessan ni eeramu.
Tibbana Aanaalee Hamballaa Waamannaa, Qarcaa fi iddoowwan birootti rakkoon jabaan mudatee jiraachuu dubbatu jiraattonni.
Rakkoon aanaalee kanneenitti mudate ammas furmaata hin arganne.
Lola qindaawaa dhalattoonni Uummata Geedoo fi Burjii jiraattota Aanaalee kanneenii irratti bananiin lubbuun namoota hedduu gaaga’ameera. Hedduunis miudhamaniiru. Qabeenyi guddaan barbadaa’uu fi kumaatamni qe’ee ofiirraa buqqaafamaa jiraachuu dubbatu jiraattonni OMNf yaada kennan.
Guyyaa Kaleessaas Aanaa Hamballaa Waamannaa fi Aanaalee birootti yoo xiqqaate lubbuun namoota 10 darbuu dubbatu jiraataan Godina Gujii irraa dubbifne.
Ka’umsi dubbii kanaa “Gaaffii Riferendamii kanaan dura lafa Oromiyaa irratti dhiyeeffatanii fudhatama dhabedha” kan jedhan jiraataan Godinichaa kun, wal-dhabbee yeroo yeroon mudataa jiru keessas harki qaamolee mootummaa jiraachuu dubbataniiru.
Lola uummata Godinichaa irratti baname keessatti waraanni mootummaallee harka lafa jalaan hirmaataa jira kan jedhan jiraataan Godinichaa kun, namoota lola mudate irratti booji’aman keessas miseensonni waraana mootummaa jiraachuu mirkaneeffanneerra jedhu.
Lolli kun har’as hin dhaabbanne. Wayita garasitti bilbilluttis qaamolee bifa qindaa’een uummata Godinichaa irratti lola bananii fi jiraattota naannoo gidduu wal-dura dhaabbannaan jiraachuun ibsameera.
Waraanni Mootummaa “qaama uummata nagaa irratti lola baneef golgaa ta’ee tajaajilaa jira” jedhamuun komiin irratti dhiyaatus bakkicha buufatee jiraachuun beekameera.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa rakkoo kanaaf xiyyeeffannoo malu kennuun, qaamolee nageenya hawaasaa gooluun badii lubbuu dhala namaa guyyaa guyyaan hordofsiisaa jiran nurraa qolachuu qabaan yaada jiraattota Godinichaati.
Abdi Mohamed Omar a visionary leader !!!!!! What a trash!
A trash sent from Jijiga and posted by Tigray online says it all.